Umzi mveliso wase China waseAntiy-Haze Window Screen kunye nabaxhasi | Dongjie
Izikrini zeAnti-haze iwindow ayijonganga kwahlukile kwizikrini eziqhelekileyo zefestile. Kodwa ngokungafaniyo nezikrini eziqhelekileyo, lo mngxunya wefilim uzele yimingxunya engabonakali ngamehlo. imingxunya.Ipores zomzimba ezijikelezayo zivumela iimolekyuli zodlula kuphela, ngoko amasuntswana amahle anjenge-PM2.5 anokuthintelwa yifilimu ecekeceke ngaphandle kokuchaphazela ukuhamba kwamacandelo ezinto ezinjenge-carbon dioxide.
Igama lemveliso PM2.5 Isihluzo se-Mesh / isikrini se-Mesh / izikrini zefestile ze-Anti-haze
Isixhobo Izinto eziyinxalenye
Ubungakanani beMesh I-100mesh, 135mesh, 200mesh, 800mesh
Umbala Mnyama, mhlophe, grey
Ubude I-30m, 50m, okanye yenziwe yona ngokwezifiso
Ububanzi 1m, 1.2m, 1.25m
Unyango oluphezulu I-Whitewashing, i-baking varnish, i-Powder edityanisiweyo
Izicelo Ifestile, umnyango, udonga lwekhetheni, ukugqalwa kwezakhiwo kunye nomhlobiso, ukubiyela
Uncedo lweMes Wind Screen yethu Mesh
(2) Ukuhanjiswa kwamaza kunye nokubonakala kwe HD
(3) Ukunyaniseka okugqibeleleyo.
(4) Uthintelo luthuli.
(5) Unyango lweentsholongwane kunye nezinambuzane.
(6) Ioyile kunye nokungahambelani namanzi.
(7) Iintsholongwane, intsholongwane kunye nentsholongwane.
3.I-anti-haze iwindow iwindow yenziwa ngezinto ezihlanganisiweyo ezinobubanzi obunqabileyo, obunokunciphisa ukumelana komoya kunye ne-mesh entle kwaye bonyuse umoya.Isixhobo se-gauze ngokwayo sinombane osisigxina, i-adsorbs uthuli oluncinci kakhulu kwimitha, iyithintela ukuba ingangeni Igumbi.Umphezulu we-mesh ugudile kwaye awukho uthuli, ke kulula ukuba ucoce.
Ifestile yesikrini se-anti-haze ayinakukhusela i-haze kuphela egumbini, kwaye inokusasazeka kokukhanya kunye nokujikeleza komoya, akufuneki sinexhala malunga nokufakwa kolu hlobo lwefestile, olubangelwa kukungena komoya kunye nokukhanya komoya okubi kunye ukungasebenzi komoya ngaphakathi nangaphakathi kunye nezinye iingxaki.
Iimveliso zethu zescreen sefestile zisetyenziswa ngokubanzi ukukhusela iingcongconi,
Ukuphelisa ingxolo, ukukhusela indawo yokubhukuda njalo njalo kumzi-mveliso, indawo ekuchithelwa kuyo iiholide, ibhanki, ikhaya labaluphele, ulwakhiwo lwabahlali, isikhululo seenqwelomoya, isibhedlele, isikolo, isakhiwo seofisi, villa ephezulu kakhulu.
Edlulileyo: Isikhuselo se Window Window
Okulandelayo: Isikrini Esiphezulu-Inkcazo yewindows